Ebee ka ịchọta ndepụta ndị na-eduzi azụmaahịa PR dị elu?
A na-ewere ngalaba ngalaba Edu dịka ike kachasị na weebụ. Backlinks nke sitere na saịtị ndị a nwere ọtụtụ ikike na uru maka njikọ weebụsaịtị.
Edu backlinks bụ njikọ nke sitere na ebe nrụọrụ weebụ na-akụzi ihe dị elu. Google na-adọta njikọ dị otú ahụ dị ka onye nwere ntụkwasị obi na nke kachasị ikikere ma na-enye otuto na ngalaba njikọ - crear estudio fotografico profesional. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọtụtụ àgwà azụ backlinks dị iche iche nwere ike iweta uru gị na saịtị gị karịa ọtụtụ puku njikọ njikọ ala ma ọ bụ n'etiti. Ha nwere ike ịkwalite ọnọdụ gị ma nyere gị aka ịbanye na TOP nke ibe nsonaazụ ọchụchọ.
Dị ka iwu edu ngalaba anaghị adị mfe ịnweta ma ọ bụ naanị ndị nwere ụlọ akwụkwọ mmuta nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ha na ngalaba ngalaba. Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ ngalaba ngalaba anọwo gburugburu ruo ogologo oge. Ihe ntanetị weebụ na-adị na weebụ ruo ogologo oge nwere ọtụtụ njikọ na-abata na nke dị elu PageRank. Ọ bụ ya mere ọ na-eji dị mfe imepụta ndepụta azụlinks. Ma mụ onwe m, Google na-akwado ụlọ ngalaba. Otú ọ dị, ọ dị gị mkpa ịrụsi ọrụ ike n'okpuru ọdịnaya gị, njirimara saịtị na aha aha iji nweta akara azụ azụ. Ọ bụ ya mere nka ji eme nnyocha na-adabere na ihe mmụta ma kwenyere na ilekwasị anya n'inweta ụfọdụ backlinks azụmaahịa maka njirisi njikwa search engine nwere ike inyere gị aka ịkwado mma.
Ụzọ iji nweta ndepụta nke backlinks backlinks
Ụfọdụ webmasters kwenyere na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịnweta azụlinks maka free. Ọtụtụ ihe mgbochi adịghị ekwe ka webmasters mepụta njikọ ndị na-abanye na azụlinks azụ. O siri ike ịjụ ọdịnaya, ọ na-egbu mgbu ịgbaso ihe niile achọrọ, na ihe ndị ọzọ na-asọ oyi na-eme ka ndị nwe ụlọ ọrụ ghara ịzụlite ụlọ njikọ ụlọ.
Otú ọ dị, n'eziokwu, ihe niile dị mfe. Ọ bụrụ na ị maara ihe ị na-eme, ịnweta ọzụzụ backlinks agaghị abụ mgbagwoju anya. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị bịa jiri ụzọ dị irè na-arụ ọrụ ụlọ na ịgbaso ha. Ka anyị tụlee ụfọdụ n'ime ha.
Ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji nweta njikọ sitere na ngalaba ọ bụla, gụnyere ihe agụmakwụkwọ. Ebe nrụọrụ weebụ Edu buru ibu na ibe akwukwo. Nke a nwere ike ịba uru maka webmasters mara ihe ha na-eme. Okwesiri ighota na niche bu ihe eji eme ihe. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na etinyere azụmahịa gị n'ụlọ ọrụ ahụike, ị nwere ike iji ya mee ihe. Wepụta ọchụchọ Google, jiri ajụjụ ndị a: "saịtị:. edu mma + inurl: ego, "" saịtị:. eduzi ndị ọzọ: + njikọ, "wdg. Site na nyocha a, ị ga-enweta ndepụta nke isi ihe nrụọrụ weebụ. Ị ga-akpọtụrụ ndị nwe ụlọ ọrụ ndị a ma ọ bụ ndị isi ma kọọrọ ha banyere ebe nrụọrụ weebụ dị mkpa gị na nnukwu ozi gbasara isiokwu.
Ụlọ njikọ njikọ a dị mma, mana ị ga-ama na ọ dị anya na mmadụ nile ga-ejikọta na peeji nke gị ma ọ bụ akụkụ nke ọdịnaya. E nwere ihe ize ndụ nke na pasent dị mkpa nke webmasters na-eme ka atụmatụ gị kwụsị. Otú ọ dị, ịkwesịrị iji ya dị ka usoro a dị mfe ma anaghị ewe oge dị ukwuu. Ọ bụ ya mere na njikọ ọ bụla i jikwa ijide n'ụzọ dị otú a bụ mmeri maka gị.